नेपाल आज | 'ओली–प्रचण्ड सम्झौता’ थाहा छैन, त्यस्तो सम्झौता पालना गर्न हामी बाध्य छैनौं (भिडियोसहित)
'ओली–प्रचण्ड सम्झौता’ थाहा छैन, त्यस्तो सम्झौता पालना गर्न हामी बाध्य छैनौं (भिडियोसहित)
आइतबार, २४ मङि्सर २०७४ गते प्रकाशित - Bishow
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल विजयी भएका छन् । मूलतः रौतहटबाट निर्वाचन लड्दै आएका नेपालले यसपटक काठमाडौं– २ बाट लड्ने निर्णय गरे, जुन उनका लागि सुख पनि रह्यो । प्रतिनिधिसभामा सदस्यमा निर्वाचित भएको भोलिपल्टै आइतबार बिहान कोटेश्वरस्थित उनको निवासमा हामी पुग्दा नेपाललाई शुभकामना दिनेहरुको घुइचो थियो । त्यही घुइँचोबीच उनले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सो कुराकानीको सार संक्षेपः
निर्वाचनको मत परिणाम उत्साजनक देखिएको छ, वाम गठबन्धनका लागि । यो उत्साहले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, समृद्धितर्फको यात्रा निश्चित गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ?
निश्चय पनि विश्वास गर्न सकिन्छ । जनताले स्पष्ट अभिमत जाहेर गरिसकेका छन् । जनताले परिवर्तन चाहेका छन् । अबको युग भनेको विकासको युग हो । अब आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढ्नु पर्छ । आपसी खिचातानी सबै त्यागेर, इष्र्या, कुण्ठा सबै फालेर अब मुलुक राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढेको छ । यो यात्रा अब सुरु नै भइसकेको छ । यद्यपि अहिले नै निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर पनि अबको बेला भनेको आर्थिक समृद्धितर्फको हुनेछ । नागरिकको क्षमताअनुसारको उद्यमशीलता, रोजगारी वृद्धि, उत्पादकत्व बढाउने नीति लागू गर्छौैं । सिंगो देशमा यातायातको सञ्जाल फैलियोस, रेल चलोस, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बनोस्, यसैकालागि हामी काम गर्छौैं ।
जब जब नेपाली जनताले कुनै राजनीतिक शक्तिलाई स्पष्ट बहुमत दिन्छन् वा दिने विन्दूमा पुग्छन् त्यसपछि राजनीतिक शक्तिहरु आफै फुटने, मध्यावधि निर्वाचनमा जाने जस्ता काममा प्रेरित भएको विगत छ, अबका दिनलाई कसरी नियाल्नु हुन्छ ?
विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दुई तिहाइ मत दिए । स्पष्ट बहुमत पनि पटक पटक दिए । तर कहिले पनि जनताले नेकपा एमालेलाई स्पष्ट बहुमत दिएका छैनन् । जब जब नेकपा एमाले अलिकति शक्तिमा बस्यो, जब शासन गर्यो, त्यो बेला जनताको हितका लागि, राष्ट्रको विकासका लागि काम गरेको छ । नेपाली जनताले कांग्रेसलाई पटक पटक मत दिए । तर कांग्रेसले जनताको मतको सम्मान गर्न सकेन, जानेन । कांग्रेसले जनताको मतको अवमूल्यन गर्यो । दूरुपयोग गर्यो । कांग्रेसले देश विकास गर्न पनि सकेन । दूरावस्थामा लैजाने काम पनि कांग्रेसले गर्यो । अब वामपन्थीहरुले कांग्रेसले गरेको गल्तिबाट पाठ सिकेर काम गर्छ । हिजोका गल्ति दोहोरिनु हुँदैन । अहिले हामीले अवसर राम्रो पाएका छौं । अब गर्नुपर्छ ।
अरु पार्टीको तुलनामा तपाईको पार्टी नेकपा एमालेमा अहिले पनि तीन जना नेताहरुले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाइसक्नु भएको छ । यो आधारमा हेर्नेहो भने एमालेमा वरिष्ठ नेताहरुको भूमिका के हुने भनेर चर्चा हुने गरेको छ । वरिष्ठ नेताहरुले नै भूमिका नपाउने अवस्था आएर फेरि किचलो हुने त होइन ?
कुनै पनि कुरालाई तपाईले ठिक ढंगले सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने समस्या कम हुन्छ । समस्याबारे सजग हुनुहुन्छ भने त्यो समस्या समाधान गर्न पनि सक्नु हुन्छ । व्यवस्था गरियो भने समस्या हुन्छ । कम्युनिष्टहरु समस्या व्यवस्थापन गर्न सक्छन । त्यो कुशलता चाहिन्छ ।
तपाई स्वयं, झलनाथ खनालका लागि केही सोच्नै पर्दैन, उहाँहरु प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ भनेर अध्यक्ष केपी ओलीले दिनु भएको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
नेकपा एमालेको मात्रै कुरा होइन । अब त हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रमा भएका नेताहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बेला आएको छ । सबैलाई मिलाएर जाने सोच हुनु पर्छ । त्यो दक्षता हामीले आर्जन गर्नुपर्छ । हरेक पार्टीमा व्यवस्थापनका समस्या आउँछन् । त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्दै लैजानु पर्छ । समस्या आयो भन्दैमा भागेर हुँदैन । सुझबुझपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामी तीनजना नै प्रधानमन्त्री भइसकेका छौं । पार्टीको प्रमुख भएर भूमिका निर्वाह पनि गरेका छौं । विभिन्न नेताहरुलाई, कार्यकर्ताहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
चुनावी गठबन्धन भए पनि पार्टी एकता हुँदैन भन्नेहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
हामी नेपालीहरु धेरै शंका गर्छौैं । पहिले यो चुनावी तालमेल होला र ? भन्ने गर्थे । त्यो भन्दा अगाडि चुनाव होला र ? संविधान जारी होला र ? भन्थे । हुने कुरा केही पनि नपत्याउने, नहुने कुरामा शंका गर्ने बानी छ । चुनावी गठबन्धनमात्रै होइन अब पार्टी एकता पनि हुन्छ ।
६४ सालको निर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई ठूलो आकारमा स्थापित गरिदिए । प्रचण्डले त तपाईहरुलाई हरुवा पार्टी भनेर पटक पटक उडाउनु भयो ।
प्रचण्डमा आएको त्यो दम्भ अब फेरि एमालेका नेतामा आउने हो कि ?
नेकपा एमाले यसअघि पनि देशको ठूलो पार्टी बनेको हो । दोस्रो ठूलो पार्टी त पहिलो निर्वाचनबाटै भयो । दोस्रो निर्वाचनमा पनि दोस्रो बन्यो । ५४ सालको निर्वाचनमा पहिलो ठूलो पार्टी बन्यो । धेरै ठाउँमा त्यो बेला जित्यो । त्यसपछि ६४मा धक्का खायो । त्यसपछि ७० मा पनि दोस्रो ठूलो पार्टीका रुपमा अगाडि बढ्यो । यसहिसाबले एमाले सफलताकै क्रममा छ । अहिलेको सफलता भनेको एमालेको राम्रो कामबाट प्राप्त भएको हो । कांग्रेसको असफलता उसैको कामबाट भएको हो ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पहिलो अढाई वर्ष एमालेले दोस्रो अढाई वर्ष माओवादीले शासन गर्ने र पार्टीको नेतृत्व पनि आलोपालोका आधारमा गर्ने सहमति भएको भन्ने गरिन्छ, खास के हो ?
त्यस्तो केही सहमति भएको छैन । कुनै सहमति भएको जानकारी पनि मलाई थाहा छैन । यदि भएको छ भने त्यस्तो भएको कुरालाई मान्न हामी बाध्य पनि छैनौं । पार्टी अध्यक्षको हिसाबले होइन, पार्टीको कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्छ । कमिटीले दिएको अधिकारका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ अध्यक्षले । मलाई त्यस्तो कुनै सहमति गर्नुभएको छ भन्ने लाग्दैन । केपी ओलीले मलाई यसबारेमा स्पष्ट पार्नु भएको छ । ‘बाहिर चलेका हल्ला मात्रै हुन्’ भन्नु भएको छ ।
उसो भए अबको पाँच वर्ष एमालेकै शासन हुन्छ त ?
एमाले र माओवादी मिलेरै यो देशलाई नेतृत्व गर्नेछन् आगामी पाँच वर्षसम्म । यसबारेमा हामीले बसेर छलफल गरिसकेका छ्रैनौं । चुनावको परिणाम के हुन्छ, त्यसको परिणाम हुन्छ त्यो निक्र्यौैल नभई यसबारे भन्ने केही कुरा छैन । माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पनि हामीले न्यायोचित, वैज्ञानिक, व्यवहारिक तरिकाले काम दिनेछौं । अहिले नै यसो गर्छौं भनि हाल्न सकिदैन । किनभने यसबारे छलफल भएको छैन ।
सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले नै बन्ने देखियो । आगामी पाँच वर्षसम्म एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ कि बीचमा फेरबदल हुन्छ ? स्पष्ट पारिदिनूस न ।
यसबारे छलफल भएको छैन । जे सुकै भए पनि नीतिले निरन्तरता हुन्छ । नेतृत्व किन फेरबदल गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । नेतृत्वका लागि मरिहत्ते किन हुन्छ ? भन्ने कुरा आउँछ । मुख्य कुरा भनेको पाँच वर्ष काम गरेर देखाउनु पर्छ ।
प्रचण्डलाई धेरैले चञ्चल र अस्थिर भन्छन्, तपाईहरुले चाहिँ किन यति धेरै विश्वास गर्नुभयो ?
तपाईहरुले पनि देखिरहनु भएको छ । कमरेड प्रचण्डले आँट र हिम्मत नदेखाउनु भएको भए अहिले यस्तो गठबन्धन सम्भव थिएन । एकता सम्भव थिएन । आँट त उहाँले गर्नुभयो । हाम्रो पार्टीलाई विश्वास गर्नुभयो । हाम्रो पार्टीलाई कन्भिन्स गर्नुभयो । एकता गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षका पनि मानिसहरु थिए होलान् । उहाँहरुको पार्टीमा पनि थिए होलान । नहुने कुरा छैन, एउटा पार्टीमा फरक फरक प्रकृतिका मानिसहरु हुन्छन् । मिलाएर लैजानु पनि नेतृत्वका क्षमता हो । यसकारण प्रचण्डको कमजोरी मात्रै मैले गीत गाएर हिँड्न हुँदैन । उहाँका कमजोरी होलान, सबल पक्ष पनि होलान् । यस्तो सबैमा हुन्छ । हामीले सकारात्मक कुरा, राम्रो पक्ष, गुणकारी विषय हेर्नुपर्छ ।
अब अलिकति विकासका कुरा गरौं, वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्रले भनेको छ कि आगामी पाँच वर्षमा पूर्वपश्चिम रेल, पूर्वपश्चिम राजमार्ग २ बाट ६ लेन, हुलाकी राजमार्ग ४ लेन, काठमाडौं – निजगढ दू्रत मार्ग, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली, प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर । यस्ता कति हो कति ।
यो वाचा गरेर चुनाव जित्नु भएको छ । अध्यक्ष ओलीले हिजै भनिसक्नु भयो कि घोषणापत्र अलि हतारमा बनाइयो । तपाईको मत चाहिँ के छ ?
के लेखियो घोषणापत्रमा त्यो हेर्दैनन् । त्यो बीचमा काम के कसरी भयो, कति भयो त्यो हेर्छन् । महाकवि देवकोटाले भन्नु भएको छ कि ‘उडिछुनु चन्द्र एक’ तर त्यो बेला चन्द्रमामा त कोही पुगेको थिएन । तर पछि त मान्छे पुग्यो नी । त्यस्तै हो । हामीले उद्देश्य ठूलो लिनु पर्छ । केही अंक तलमाथि हुन सक्ला । त्यसका वावजुद हामीले राम्रो परिकल्पना तय गरेका छौं । कामको प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ । पहिले रेल बनाउने कि बिजुली उत्पादन गर्ने ? यस्ता प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्नुपर्छ । एक र अर्कोबीच सन्तुलन मिलाएर गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन अघि भन्नु भएको थियो कि दुई तिहाई बहुमत ल्याउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने । यदि तपाईहरुले संसदमा दुई तिहाई पुर्याउन सक्नु भयो भने त्यसो गर्नु हुन्छ ?
हामीले त्यस्तो भनेका छैनौं । हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छैनौं । त्यसबारेमा आवश्यक पर्यो भने छलफल गरौंला भनेको हौं । छलफल गर्न तयार छौं । देशले खोजेको विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो । रोजगारी हो । यी उद्देश्य पूरा गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै नभए भएन भने सोचौंला । नत्र किन चाहियो त्यस्तो व्यवस्था ।
नेपाली कांग्रेसले अधिनायकवादी शासन सुरु हुन्छ भनेर धेरै कटाक्ष पनि गरेको थियो । अबको शासन कस्तो हुन्छ ? कांग्रेसी नेताहरुकालागि यहाँको सन्देश के छ ?
उहाँहरुले हामीप्रति गरेको संशय हाम्रो व्यवहारबाटै हट्नेछ । तै पनि उहाँहरु ठोकुवा गर्नुहुन्छ भने त्यो समय पर्खेर बसे हुन्छ । हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पालना गर्छौं । संविधानप्रदत्त अधिकारहरुको नेपालका कम्युनिष्टहरुले संरक्षण गर्नेछन् । लोकतान्त्रिक संस्कार हुर्काउन जोड गरिनेछ । खुला समाजको पक्षपोषण गरिनेछ । व्यापार अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । यसर्थमा हामीले सामाजिक न्यायको पक्षमा काम गर्नेछौं । विभिन्न समुदायप्रति जिम्मेवारी बोध गर्नेछौं । समाजवादउन्मुख नीति अवलम्वन गर्नेछौं । यी नीतिहरुबाट पछि हट्नेछैनौं । मूल रुपमा उत्पादन प्रवद्र्धनमा जोड दिनेछौं । देश बलियो बनाउने गरी काम गर्छौं । बलियो देशको नागरिक बनाउने छौं । यसकारण कांग्रेसले शंका गर्न आवश्यक छैन ।
मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलका आफ्नै गुनासा र मागहरु थिए । ति बिषयमा तपाईहरुको दृष्टिकोण के हुनेछ ?
यदि न्यायोचित माग छन् भने पूरा हुनेछन् । तर त्यसमा जनताको हित हुनुपर्छ । देशको हित हुनुपर्छ । जायज कुराहरु सम्बोधन गर्न तयार छौं । राष्ट्र, नेपाली समाज, जनताको प्रगतिको पक्षमा भयो भने संविधान संशोधन पनि हुन्छ ।